Mazano ekudzokorodza: ​​iwo akanakisa mazano ekuvandudza kumba | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 04/05/2022 12:00 | Kudzokorora
Nekudzokorodza zvinhu zvemazuva ese, pamusoro pekuchengetedza mari uye kupa yekutanga uye yemunhu kubata kudzimba dzedu, tinogona kuderedza marara uye kunyanya kuremekedza nharaunda. Pane zvakawanda pfungwa dzekudzokorora kumba uye kukwanisa kupa hupenyu hwechipiri kune izvo zvisisashandiswe sezvazvaive zvakatemerwa kuve marara.
Muchinyorwa chino tichakupa mamwe eakanakisa mazano ekudzokorodza kumba.
1 Kukosha kwekudzokorodza kumba
2 Pfungwa dzekudzokorodza
2.1 Bhodhoro repurasitiki sehari yemaruva
2.2 Container ye pasta nemiriwo
2.3 vase nebhodhoro
2.4 Girazi yogati mukombe sechibatiso chekenduru
2.5 Gadzirisazve chibharumu chabviswa mweya
2.7 Rambi nepurasitiki chipunu
2.8 Murongi ane kadhibhodhi machubhu
2.9 mufananidzo furemu nechirongo
2.10 Mhuka ine soda cap
2.11 Sherufu yemabhuku
2.12 Kenduru yekushongedza ine chivharo
2.13 Hanger nemidziyo yekare
2.14 Rambi rine girobhu rekare
2.15 Zvishongo mabhokisi ane mabhodhoro epurasitiki
Kukosha kwekudzokorodza kumba
Tsika yekudzokorodza yakave yakakosha zvikuru mumakore achangopfuura. Izvi zvakaratidza kuva nzira yakanakisisa yekuderedza kuwanda kwemarara anosvibisa nharaunda. Kunyangwe hazvo kutenga zvinhu kwaita kuti basa iri rive rakaoma, vanhu vakawanda vanosarudza kushandisazve zvimwe zvinhu zvedzimba dzavo. Nepo zvakawanda zvingaita sezvisingabatsiri, pane mamwe mazano uye mazano aungashandisa kudzivirira kuti uzvirase kure.
Mabhenefiti ekugadzira kudzokorodza kwakangofanana neaya echinyakare kudzokorora: kutarisira zvakatipoteredza, kuderedza kusvibiswa, kuderedza greenhouse magasi, kuchengetedza zviwanikwa uye, zvakanyanya kukosha, kukudziridza tsika dzekushandisa zvine hungwaru.
Zvakadaro, rudzi urwu rwekudzokorodza runotipa kukosha kwakawedzerwa: runotibatsira kusimudzira hunyanzvi uye runoita kuti tiwedzere kutsvaga mhinduro dzemazuva ese nezvinhu, zvinhu uye zvigadzirwa zvatinazvo.
Haisi yekungorongedza nekushandisa zvakare, Kubatsira kukuru kwekugadzira kudzokorodza kuziva kutora zvatagara tinazvo uye kuzvipa yechipiri kana kunyange chetatu kutenderera kwehupenyu, nokudaro kufambisa maitiro ekushandisa zvine hungwaru.
Nzira yakanaka yekushandisa nguva dzisingakanganwiki nemhuri yako uye nekupa hupenyu kune zvigadzirwa zvausingachashandise ndeye kugadzira kudzokorodza zvakare. Pamusoro pemazano atinokupa mune ino positi, iwe unogona zvakare kutarisa yedu DIY gwara kwaunogona kuwana mienzaniso yekugadzira zvinoshamisa mhizha.
Bhodhoro repurasitiki sehari yemaruva
Kana iwe uri kufunga kugadzira gadheni remudhorobha, unogona kudzivirira kutenga mapoto uye nekubatsira pakushandisa zvine musoro uchishandisa mabhodhoro epurasitiki asina chinhu. Necheki unogona kuzvicheka nepakati, gadzira diki pazasi kuti ubvise mvura, woazadza nevhu kuti ugone kudyara sezvaunoda. Zvakare, gadheni remudhorobha inzira yakanaka yekukura chikafu chako uye kutanga chiitiko chinozobatsira kwete chete nharaunda, asiwo pfungwa nemuviri.
Container ye pasta nemiriwo
Iri zano rinokutendera iwe kuchengetedza nzvimbo uye kuchengetedza zvigadzirwa izvi zvitsva kwenguva yakareba. se? Shandisa mabhodhoro epurasitiki, sezvinwiwa, uye suma mupunga, chickpeas kana pasta kuti zvirambe zviripo.. Nependi yemvura, unogona kuzvishongedza kunze kuitira mamwe mabasa ekugadzira uye wozvizivisa nemakasi echigarire kuti uzive zvavari.
Iyi ndiyo nzira yekare yekugadzira kudzokororwa kwemabhodhoro egirazi. Iwe unogona kuvapenda mumavhasi akanaka uye kushongedza imba yako nenzira yepakutanga.
Girazi yogati mukombe sechibatiso chekenduru
Rimwe basa remagirazi aya rinogona kushandiswa sepakati pepakati. Iwe unongofanira kuvashambidza uye kuisa kenduru pavari kuitira kuti chiedza chionekwe muimba yose.
Gadzirisazve chibharumu chabviswa mweya
Mabhora akacheneswa anogaroiswa mumakona nekuti haachashandiri chinangwa chaanoronga. Nekudaro, nekuda kwezvinhu zvavanogadzirwa nazvo, Inogona kushandiswa kugadzira mabhegi emitambo anofadza.
Tinokupa zano kuti usarase mvura yemubhodhoro kana zvinwiwa. Icheke kuita zvidimbu uye uzvigadzirire nemitsara yejira kugadzira zvishongo zvinoyevedza.
Rambi nepurasitiki chipunu
Zvipunu zvinoraswa zvakasara kubva kuzororo zvinogona kushandiswa zvakare sezvibatiso zvemwenje, kungocheka hafu yepasi, shandisa glue yakaonda uye kubatanidza kune chigubhu kana bhodhoro remvura.
Murongi ane kadhibhodhi machubhu
Kadhibhodhi chimbuzi mapepa machubhu uye zvimwe zvigadzirwa zvakafanana zvinogona kushandiswa kugadzira tambo vanoronga. Iwo anogona zvakare kushandiswa kuronga makeup, mapenzura uye nezvimwe. Isa akati wandei mumakadhibhokisi uye shandisa rimwe nerimwe semupatsanuri wezvinhu zvataurwa. Zviri nyore kuita.
mufananidzo furemu nechirongo
Inosanganisira kuisa mapikicha mumagaba egirazi. Zvadaro, iwe uchafanirwa kuizadza nemafuta akawanda.
Mhuka ine soda cap
Nekuda kwechimiro chavo, zvivharo zvesoda zvakanakira kugadzira nevana. Semuenzaniso, nekuvanamatira pamakadhibhodi, unogona kugadzira mhuka diki dzakanaka dzekushongedza. Imwe sarudzo huru ndeyekunamatira kumusuwo kana firiji ine magineti. Iwe uchave uine nyore uye inonakidza varaidzo.
Vadi vemabhuku vanowanzounganidza mabhuku avasingazoshandisi zvakare. Panzvimbo pokuarasa, tinogona kuashandisazve ndokugadzira iyi sherufu yakaisvonaka. Nenzira iyi, tinogadzira zvinoshamisa zvinoonekwa maitiro. Ruremekedzo kuzvinyorwa zvepakutanga izvo zvinosiya munhu wese anotishanyira asina remuromo.
Kenduru yekushongedza ine chivharo
Makoroni kubva kune mamwe marudzi ezvinwiwa anogona kushandurwa kuita makenduru madiki ekushongedza muimba yekutandarira kana yekurara. Mukuwedzera, ivo vari nyore kwazvo kugadzira. Vazadze nenamo; isa mwenje mudiki pavari uye uvasiye vazorore. Zvisinei, nguva dzose chenjerera kuti havagoni kupisa chero chinhu chakavapoteredza.
Hanger nemidziyo yekare
Zvishandiso izvi zvinogara zvichitibatsira nemamwe mabasa epamba. Zvisinei, mamwe asakara zvekuti takaatsiva netechnology yakawanda. Kuti usazvirasa, zvipete wozvinamira panzvimbo yemapuranga kuti utore zvirembera. Nenzira iyi, iwe uchawana inobatsira uye rustic yekushongedza.
Rambi rine girobhu rekare
Nekuda kwegirazi rayo rakanaka, girobhu rine kubata kwakanaka uye rakakwana pakushongedza. Kutanga, kana uine zvimwe zvekare, zvibvise pamusoro, uzadze nemafuta kana mvura, woisa tambo pazviri.
Zvishongo mabhokisi ane mabhodhoro epurasitiki
Ruva chimiro pazasi pemabhodhoro mazhinji epurasitiki inogona kushandiswa kugadzira akawanda-layer jewelry mabhokisi.
Ndinovimba kuti nemazano aya ekudzokorodza unogona kupa tsanga yako yejecha kuchengetedza uye kutarisira nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Pfungwa dzekudzokorodza
Zvikonzero zve greenhouse effect